I-De-Aeration esebenza kahle kakhulu ye-Liquids isebenzisa i-Ultrasonics - Hielscher Ultrasound Technology
Ngenkathi i-degassing noma i-outgassing imvamisa kuyisinyathelo senqubo esisebenzisa kakhulu isikhathi, i-ultrasonication ingasheshisa ukuhlangana kwamabhamuza wegesi nokukhuphuka kwawo kakhulu. Ukukhishwa kwe-Ultrasonic kungasetshenziswa kuma-batch naku-inline setups futhi kungahlanganiswa namasu we-degassing ajwayelekile njengoku spar nge-inert gases, impeller degassers, Ukushisa noma i-vacuum ukuze kuthuthukiswe ukusebenza kahle nokushesha kokususwa kwegesi.
Ukususa igesi kusuka ku-Liquids
Amagama athi ukwehla, ukususwa kanye nokukhishwa kwewayini kubhekise ekususweni kwamagesi aphefumulayo nalawo ancibilikisiwe, ikakhulukazi amagesi asebenzayo afana nomoya-mpilo noma i-CO2, kusuka kuketshezi. Ukuqeda i-oksijeni kubalulekile ukuvikela izinguquko zomkhiqizo wokugcina ezenzakalayo nokwenza ngcono ukucubungula okungaphansi. Ukwenza i-degassing kuyisinyathelo esidingekayo sokucubungula kwezicelo eziningi nezimboni. Ekukhiqizeni kwezimboni, i-degassing iyinqubo ejwayelekile yenqubo yokuqinisekisa ukuzinza komkhiqizo, ikhwalithi kanye namazinga womkhiqizo aqhubekayo. I-oksijeni iyinto ethonya ikhwalithi yomkhiqizo nokuzinza emazingeni ahlukahlukene.
Ngakho-ke, ukwehla kuyisinyathelo senqubo esunguliwe ekudleni & isiphuzo, imboni yamakhemikhali, yezemithi nezimonyo. Kepha futhi nasemalabhorethri, amasampula adinga ukwehliswa ngaphambi kokuhlaziywa (isb., Ngaphambi kwe-HPLC, ukuhlolwa, ukukalwa kwezinhlayiyana njll.).
Imvamisa ukuxubungula izinqubo kusetshenziswa isib, i-high-shear blade noma i-rotary impeller mixers imvamisa yenza ukucekelwa okulandelayo komkhiqizo kudingekile, ngoba lezi zindlela zokuxuba zivame ukwethula inani eliphakeme lamagesi kulo mkhiqizo. Ukufakwa okunjalo kwegesi nomoya kuvame ukuba nemiphumela emibi kumkhiqizo, njengoba kungenza amafutha namafutha abe rancid, kuwohloke imikhiqizo nge-oxidation, ukukhipha umbala kanye nokuguqulwa okungafuneki kwephunga nokunambitha. Njengoba imikhiqizo edilizwa izinzile ngokwamakhemikhali futhi inempilo eshalofini ende, i-degasification iyisinyathelo sokucubungula esibalulekile esidinga inqubo ethembekile.
I-Ultrasonic degassing: Amabhamuza egesi ahlanganisiwe asuswa emafutheni kusetshenziswa i-ultrasonicator UP400St
UP400St – uhlelo lwe-digital ultrasonic degassing
I-Ultrasonic Degasification neDe-Aeration
I-Ultrasonic degasification kanye ne-deaeration kuyindlela enamandla kakhulu yezindlela zendabuko zokunciphisa uketshezi okubandakanya ukubilisa, ukunciphisa ingcindezi yokuhlanza, noma ukusakaza ngamagesi angenawo amandla. Lezi zindlela zendabuko zokunciphisa zivame ukuza nezinkinga ezifana nokuwohloka okushisayo (ngenxa yokushisa), ukucubungula okudla isikhathi namandla kanye / noma ukukhishwa kwegesi okunganele. I-Ultrasonic degassing isuselwa kumgomo wokusebenza we-acoustic cavitation. Lapho amagagasi e-ultrasound enamandla amakhulu ahlanganiswa abe uketshezi, uketshezi luyacindezelwa futhi lwandiswe phakathi nemijikelezo yengcindezi ephezulu nengaphansi, ngokulandelana. Ngesikhathi semijikelezo enengcindezi ephansi, kudalwa amabhamuza we-vacuum (okuthiwa ama-bubble cavitation), akhula ngaphezu kwemijikelezo eminingana yengcindezi. Phakathi naleyo mizungezo yokukhula kwamabhamuza, amagesi ancibilikile asoketshezi angena kubhamu elingenalutho, ukuze ibhamu elingenalutho liguquke libe amabhamuza egesi akhulayo. Ngaphezu kwalokho, ama-micro-turbulences nama-jets we-liquid abangela ukuphazamiseka okukhulu nokudluliswa okukhulu. Lezi zimo ezikhiqizwe nge-ultrasonically zidala i-gas bubble coalescence, okuwukuhlanganiswa kwamabhamuza amancane ancibilikisiwe egesi abe ngamabhamuza amakhulu egesi, asheshe akhuphukele ngaphezulu kuketshezi, lapho ashiya khona uketshezi.
Izinguquko zokushisa ezibangelwa ukudlidliza kwe-ultrasonic kanye ne-cavitation zigcinwa ezindaweni ezincane kakhulu zendawo futhi izinga lokushisa lenyuka kumthamo ophelele linganakekelwa ngoba aliphazamisi ikhwalithi yomkhiqizo.
Ngokuya ngevolumu, i-viscosity negesi inclusions ye-liquid noma i-slurry, i-ultrasonic de-aeration ingaqhutshwa njengenqubo ye-batch noma emgqeni. Iphenyo enamandla amakhulu e-ultrasonic ikhipha i-acoustic cavitation kulolo ketshezi, ukuze uketshezi lususwe kahle.
I-Ultrasonic degasification nayo ingasetshenziswa ukwenza ngcono izinhlelo esezikhona kakade zokufudumeza njengokufudumeza, ukuvota noma ukusabalalisa.
I-Ultrasonic degassing ne-defoaming isetshenziswa esikalini sezimboni ukususa amagesi ancibilikisiwe emanzini, uwoyela, ukudla neziphuzo, izixazululo zamakhemikhali, uketshezi lwe-hydraulic, okokupholisa, okokugaya uketshezi, uwoyela ongahluziwe, ama-emulsions, upende, ama-inki, ama-adhesives, i-varnishes, ukumbozwa, ama-epoxies, ama-shampoo, okokuhlanza neminye imikhiqizo eminingi.
I-Ultrasonic degassing isebenzisa ukusethwa kweseli yokugeleza. Lokhu kuhlolwa kwakuyisibonelo samanzi esikali samanzi amancane esinomthamo wamalitha angu-0.8, ukugeleza kwegesi okuyi-inert okungu-0.2 sfcm / min, namandla we-275 W / cm2. Lokhu kukhombisa ukwehliswa kwesikhathi sokususwa komoya-mpilo cishe ngama-70%.
Ukufunda nesithombe: Rubio et al. 2016
I-Ultrasonic Degasification neDe-Aeration ilungele:
Ama-viscosities aphansi futhi aphezulu
Amanani Amancane Namakhulu
Amazinga Okushisa Okubandayo Nashisayo
Ukusebenza okungu-24/7 ngaphansi Komthwalo Ogcwele
I-Ultrasonic degassing ekusethweni okusemgqeni kusetshenziswa i-ultrasonicator I-UIP1000hdT ngokugeleza kweseli.
Ukusethwa kwe-Ultrasonic degassing yokususwa kwegesi okusemgqeni okuqhubekayo
Ukwehlukaniswa okuthuthukisiwe kwe-Ultrasonically
Ukonga iziphuzo ngegesi engena ngaphakathi (okwaziwa nangokuthi ukuhlanzwa kwegesi ngaphakathi) kuyindlela ejwayelekile yokwelapha ukukhipha amagesi angafuneki njenge-oxygen ne-carbon dioxide kulolo ketshezi. Ngokusebenzisa okwehlukanisa, i-nitrogen, i-argon, i-helium namanye amagesi we-inert asetshenziswa kakhulu. Ukugcoba isixazululo nge-high-purity (okujwayelekile okuyi-inert) igesi kungakhipha okungafuneki, amagesi avele ancibilike anjenge-oxygen ne-carbon dioxide. Inqubo yokuncipha incike ekudlulisweni kwenqwaba futhi uqobo iyinqubo ehamba kancane. Ngiyalela ukuqinisa ukusakazeka ngamagesi angenawo amandla, isixazululo segesi eliwuketshezi luvame ukufutheliswa ngamandla futhi liphuphume isikhathi eside. I-Ultrasonication inqubo yokuqinisa i-degasification, ethuthukisa ukudluliswa kwesisindo futhi ngaleyo ndlela ihlukane kakhulu. Lapho amagagasi e-ultrasound enamandla amakhulu ahlanganiswa abe uketshezi noma ama-slurries, kwenziwa amabhamuza e-cavitation. Lawa maqebelengwane e-cavitation aqhekeza amabhamuza egesi amakhulu ahlanza amabhamuza amancane bese ewasakaza ngendlela efanayo, okuholela emiphumeleni yokuhlanza esheshayo nehlanzekile. Ukuyaluza okukhulu nokuxokozela okwenziwe yi-ultrasonication kuthuthukisa ukudluliswa kwesisindo samanzi kagesi futhi ngaleyo ndlela kususwe ngokushesha amagesi angafuneki.
Ukuze kusheshiswe futhi kwenziwe inqubo yokusabalalisa isebenze kahle, i-ultrasonics esebenza kahle kakhulu isetshenziselwa ukwenza ngcono ukusebenza kokudlulisa okukhulu phakathi kwegesi noketshezi. Imiphumela ye-sonomechanical eyenziwe yi-acoustic cavitation ifaka phakathi ingcindezi yendawo kanye nokwehluka kwamazinga okushisa, ama-microturbulence kanye nokuphazamiseka. Le mikhosi ithuthukisa ukusebenza kwe-degassing ngokunikela ekwandeni kokudluliswa kobunzima obungafani ngenxa yokuqhekeka kwamabhamuza, ukusabalalisa kanye nokwanda okulandelayo kwendawo yokuhlangana, okugcina kuholele ekususweni okusheshayo kwamagesi avalelekile kulolo ketshezi.
Ukufeza imiphumela oyifunayo ye-outgassing, i-high-power ultrasonication iyadingeka. Lapho uketshezi lusindiswa ngegesi engena ekugelezeni kwezigaba ezimbili, ukusakazwa okulungisiwe kuyadingeka ukukhulisa isilinganiso sokudluliswa nokususwa kwamagesi ancibilikile. Ukufaka ukusabalalisa okulungisiwe kungaba nzima ngoba amabhamuza egesi abambekile futhi ancibilikile avame ukugwema ukungena enkambeni ye-ultrasonic cavitation ngamandla aphansi. Kodwa-ke, ngamandla aphakeme (angaphezulu kuka-300 W / cm2 ngo-approx. Ama-bubbles kagesi angama-20 kHz) awasayigwema indawo ye-cavitation futhi ahlukaniswa ngamabutho we-sonomechanical. (bheka uJagannathan et al. 2011)
I-Deagssing of iziphuzo iyisetshenziswa esinamandla samadivayisi we-Hielscher ultrasonic. Ividiyo ikhombisa i-Hielscher UP200S ngesikhathi sokuchithwa kwamanzi.
I-Degassing of Water isebenzisa i-UP200S ene-sonotrode S40
I-Ultrasonic Degassing yama-Aluminium Altenys ancibilikisiwe
Isizukulwane se-cavitation kuzinsimbi eziwuketshezi isicelo esidinga kakhulu futhi kunezindlela ezimbalwa kakhulu zokukhiqiza i-cavitation eyanele nethembekile ekuncibilikeni kwensimbi. Kodwa-ke, isilinganiso namandla we-cavitation yizinto ezibalulekile ezakha imiphumela yokuchithwa. Ukwehliswa okusebenzayo kudinga i-cavitation ethembekile ukuze kutholakale ukucwengwa okuphezulu kokuncibilika kwensimbi. I-cavitation enamandla nge-high-performace ultrasound ingathuthukisa ukwehliswa nge-30 kuya ku-60%.
I-Ultrasonic probe-type degassers ibhekwa njengenye yezindlela ezinokwethenjelwa kakhulu ze-outgassing, eziye zafakazelwa ukuthi zisebenza ngokwesayensi ngezinga elincane nelikhulu. Isizukulwane se-acoustic cavitation enamandla sincike ezintweni ezahlukahlukene kufaka phakathi imingcele yenqubo ye-ultrasonic, ukwakheka kwensimbi, ukungezwani kwendawo, ukushisa okuncibilikayo, i-viscosity, kanye nevolumu kanye nokonakala kwezinga lokufakwa kwegesi ekuncibilikeni kwensimbi. Amapharamitha wenqubo ye-Ultrasonic angalungiswa kahle ekwakhiweni kwensimbi encibilikayo nasezintweni ezinomthelela ukuze kutholakale ukuqina okulungile kwe-cavitation. Ukulungiswa okuqondile kwamapharamitha we-ultrasonic kuyisisekelo sezinzuzo ze-ultrascasification ye-ultrasonic yokuncibilika kwensimbi. Izinzuzo eziphambili ze-ultrasonic degassing zifaka amazinga aphezulu we-degassing kanye nokwehla komthelela wezemvelo wenqubo. Njengoba i-ultrasonic degasification ibangela kuphela imfucuza emincane kakhulu, i-ultrasonic metal melt degassing iyindlela eluhlaza, evumela imvelo.
I-degassing aluminium iyancibilika: I-Ultrasonic degassing iyindlela efakazelwe yokwandisa ama-aluminium alloys kwabantu nokunciphisa okuqukethwe kwe-hydrogen kuma-aluminium alloys. Uma kuqhathaniswa nezinye izinqubo zokususa ezinjenge-outgassing ngokusebenzisa i-rotary impeller, i-ultrasonic degassing ihamba phambili ngejubane nokusebenza kahle. Ucwaningo lukhombisile ukuthi uhlelo lwe-ultrasonic probe degassing lwalucishe luphindwe kathathu kunokususwa kwegesi okuqhutshwa impeller.
Njengoba i-degasification ye-ultrasonic ingabandakanyi ukunyakaza kwensimbi okuvamile, i-aluminium oxide evikelayo ebusweni bokuncibilika ayiphazamiseki. Ukugcina ungqimba lwe-aluminium oxide luqinile kuvimbela ukwethulwa kwe-aluminium oxide ekuncibilikeni kwe-aluminium ukuze kuyigcine nomphumela wayo wokuvikela ezingcolisweni ezisemkhathini. I-Ultrasonic degassing ithuthukisa ukucolisiswa kokusanhlamvu kanye nokwakheka kwama-aluminium alloys. Lokhu ngaphezu kokususwa okukhuthazwa nge-ultrasonically kwe-non-metallic gas inclusions kusuka ku-aluminium ewuketshezi, kwenza ukwelashwa okuncibilikiswa kwensimbi okuqhutshwa nge-ultrasound kube yindlela esezingeni eliphakeme yokukhiqiza izinsimbi ezisezingeni eliphakeme zensimbi.
Ukwehliswa kwensimbi kuyancibilika njengama-alloys e-aluminium kudinga ukusebenza okuphezulu, imishini ephezulu yamandla e-ultrasonic. I-probe ye-ultrasonic kufanele icaciswe ukuze isetshenziswe ngamazinga okushisa aphezulu kanye nama-viscosities aphezulu. I-ultrasonicator kumele ikwazi ukuletha nokugcina ama-amplitudes ahlala isikhathi eside. I-Hielscher Ultrasonics igxile ekwakhiweni, ekukhiqizweni nasekusatshalalisweni kwemishini ye-high-power ultrasound yezinhlelo zokusebenza ezifuna ukwenziwa njengokuncibilikiswa kokuncibilika kwensimbi. Ukunikezela ngama-ultrasonicators asebenza kahle kunoma isiphi isikali nama-probe e-ultrasonic aklanyelwe ngqo ukwelashwa kwezinsimbi eziwuketshezi, i-Hielscher Ultrasonics ingumlingani wakho wezinhlelo zokusebenza ezincibilikayo nezisebenza kahle zensimbi.
Udaka olususelwa emanzini ngaphambi nangemva kwe-ultrasonic degassing nge I-UIP1000hd
Isifundo nesithombe sika-Amani et al. 2016
Izinhlelo ze-High-Power Ultrasonic Degassing Systems
I-Hielscher Ultrasonics ngumakhi wesipiliyoni owenziwa isikhathi eside wemishini ephezulu kakhulu yokusebenza kwe-ultrasonic esetshenziswa emhlabeni wonke kumalabhorethri nasemikhiqizweni yezimboni. Ukwehliswa koketshezi kanye nama-slurries uhlelo oludingayo oludinga ama-probe we-ultrasonic anamandla amakhulu angahlanganisa ama-amplitudes abe yiziphuzo ukususa i-bubble yegesi eboshiwe namaphakethe womoya. Onke amadivayisi we-Hielscher ultrasonic aklanyelwe futhi akhiqizwa ku-br ahlinzekelwa i-24/7 ngaphansi komthwalo ogcwele. Amaprosesa we-Ultrasonic ayatholakala kusuka kuma-ultrasonicators e-compact 50 watts laboratory kuya kuma-16,000watts anamandla we-inline ultrasonic systems. Izinhlobo ezahlukahlukene zezimpondo ze-booster, i-sonotrode namaseli okugeleza avumela ukusethwa ngakunye kohlelo lwe-ultrasonic degassing ngokuxhumana ne-liquid, viscosity kanye negesi inclusions.
Ekwehlisweni nasekukhiqizweni kwezinsimbi eziwuketshezi, ama-amplitudes asethwe kahle futhi agcinwayo ayadingeka. I-Hielscher Ultrasonics ikhiqiza ama-probe aphezulu asebenzayo e-ultrasonic acaciselwe ama-amplitudes namazinga okushisa alungiselelwe inqubo kakhulu. Uma isicelo sakho se-degassing sidinga ukucaciswa okungavamile, ama-sonotrode e-ultrasonic enziwe ngokwezifiso ayatholakala. Ukuqina kwemishini ye-ultrasonic ye-Hielscher kuvumela ukusebenza kwe-24/7 emsebenzini osindayo nasezindaweni ezifunayo.
I-Hielscher probes ye-ultrasonic ye-degasification ingasetshenziselwa i-batch nokuqhubeka kwe-inline degasification kanye ne-deaeration. Ngokuya ngevolumu, i-viscosity namagesi abambekile, sizokuncoma ukusethwa kwe-ultrasonic outgassing efaneleke kakhulu.
Amakhekhe we-Ultrasonic Wokukhipha Noma Yimuphi Umthamo
Uhla lomkhiqizo we-Hielscher Ultrasonics lumboza ububanzi obugcwele bama-processor we-ultrasonic kusuka kuma-compact lab ultrasonicators ngaphezulu kwebench-top kanye nezinhlelo zokushayela kumaprosesa asezimboni asebenza ngokugcwele anamandla wokucubungula ukulayisha amaloli ngehora. Uhla oluphelele lomkhiqizo lusivumela ukuthi sikunikeze okokusebenza kwe-ultrasonic degassing okufaneleka kakhulu kuketshezi lwakho, amandla enqubo nezinhloso zokukhiqiza.
Zonke izinhlelo ze-Hielscher ultrasonic degassing ziyalawuleka ngokunembile futhi ngaleyo ndlela zithembeke amahhashi omsebenzi. I-amplitude ingenye yemingcele yenqubo ebalulekile ethonya ukusebenza kahle nokusebenza kwe-deacification eyenziwe nge-sonomechanically. Zonke Hielscher Ultrasonics’ amaprosesa avumela ukumiswa okuqondile kwe-amplitude. I-Sonotrodes nezimpondo ze-booster yizinsiza ezivumela ukuguqula ubukhulu endaweni ebanzi kakhulu. Amaprosesa aseHielscher ezimboni ze-ultrasonic angaletha ama-amplitudes aphakeme kakhulu futhi ahambise amandla adingekayo e-ultrasonic wezicelo ezifunwayo. Amplitudes afika ku-200µm angaqhutshwa ngokuqhubekayo ngokuqhubekayo ekusebenzeni okungama-24/7.
Amasethingi we-amplitude aqondile nokuqapha unomphela kwemingcele yenqubo ye-ultrasonic nge-smart software kukunikeza ithuba lokulungisa imingcele yenqubo ye-ultrasonic ye-degasification ye-ultrasonic esebenza kahle kakhulu. I-sonication efanelekile yokukhishwa kwegesi esebenza kahle kakhulu!
Ukuqina kwemishini ye-ultrasonic ye-Hielscher kuvumela ukusebenza kwe-24/7 emsebenzini osindayo nasezindaweni ezifunayo. Lokhu kwenza imishini ye-ultrasonic ye-Hielscher ithuluzi lomsebenzi elithembekile eligcwalisa izidingo zakho zenqubo yokuncipha.
Njengebhizinisi eliphethwe ngumndeni neliphethwe ngumndeni, i-Hielscher ibeka phambili amazinga aphezulu ekhwalithi yamaprosesa ayo e-ultrasonic. Onke ama-ultrasonicators aklanyelwe, akhiqizwa futhi ahlolwa kahle ekomkhulu lethu lasekhaya eTeltow ngaseBerlin, eJalimane. Ukuqina nokuthembeka kwemishini ye-ultrasonic ye-Hielscher kuyenza ihhashi lomsebenzi ekukhiqizeni kwakho. Ukusebenza okungu-24/7 ngaphansi kokulayishwa okugcwele futhi ezindaweni ezifunayo kuyisici semvelo sama-degassers aphezulu asebenza nge-Hielscher.
Sicela usebenzise ifomu elingezansi ukucela imininingwane eyengeziwe mayelana nama-processor we-ultrasonic, izinhlelo zokusebenza kanye nentengo. Sizojabula ukuxoxa nawe ngenqubo ye-degassing futhi sikunikeze nge-ultrasonic degasser ehlangabezana nezidingo zakho!